Si fudud oo - Lacag lagu diri karo ehelkaaga | Nidaamka Cookie-ga | Transfer Galaxy
Cookie waa fayl yar oo ku waydiiya ogolaasho in uu ku kaydmo kombiyuutarkaaga ama telefoonkaaga gacanta. Markaad ogolaatid, faylku wuu kaydsami oo wuxuu caawindonaa kala-baadhidda traafiga web-saydyada ama wuxuu ku ogeysinayaa marka aad web-sayd khaas ah gashid.
TransferGalaxy AB waxay isticmaashaa cookie-yada kala garta taraafiga web-sayada si ay u garato sayt-yada la isticmaalayo. Taas waxay nagu caawisaa kala shandheynta maclumaadka ku saabsan traafigyada web-saytyada iyo in ay noo suurtagaliso sida aan isugu habeyn karno web-saytkayaga iyo baahida macaamilka. Macluumaadka waxan ku falnaa kaliya kalashandeyn tarakoodeed ah oo kadib wuu ka tirtirmaa macluumaadku sistemka.
Cookie-yaasho waxay nagu caawiyaan si aan adiga kuugu soo bandhigno web-sayt ka sii fiican, marku noo surtagaliyo si aan u arki karno web-saytyada adiga ku anfaca iyo kuwa aan ku anfacin. Cookie-gu marna ma noo suurtagliyo si aan u gali karno kombiyuutarkaaga ama macluumaad kale oo adiga ku saabsan, oo ka duwan warbixinta adigu dooratid in aad nala qeybsatid.
Adigu waad dooran kartaa inaad aqbashid ama diidid cookie-ga. Buug furayaashaada web:ka sidey u badanyihiin si otomaatig ah ayay u aqbalaan cookie-yada, laakin inta badan adigu waad badali kartaa hab u shaqeynta buug furahaaga web:ka haddi damacdid. Taas waxay kaa hor istaagi kartaa in aad si u dhamaystiran u siticmaali kartid web-saytka.